Madaxweynaha Galmudug oo sheegay Gaalkacyo inaysan labo Maamul ka wada talineyn.. – Xeernews24
Madaxweynaha Galmudug oo sheegay Gaalkacyo inaysan labo Maamul ka wada talineyn..
9. Oktober 2016 /in WARAR/NEWS /von admin
Madaxweynaha Maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed oo Saxaafadda kula hadlay magaalada Cadaado ee Gobolka Galgaduud ayaa wuxuu ka hadlay dagaaladii ka dhacay Magaalada Gaalkacyo, isaga oo sheegay in Gaalkacyo aysan ka wada talineyn labo Maamul.
Guuleed ayaa sheegay masuuliyada dagaalka dhacay inay qaadeyso Maamulka Puntland, isaga oo tilmaamay Magaalada Gaalkacyo oo ah hal Magaalo inaysan labo Maamul ka wada talineyn.
Gaalkacyo ayaa dhanka Koonfureed waxaa ka taliya Maamulka Galmudug, halka dhanka Waqooyi ay ka taliyaan Maamulka Galmudug.
Maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa dhowr mar ku dagaalamay Magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug, xilli Dowladda Somaliya heshiis ay kala dhex dhigtay Labadaasi maamul.
Shacabka Magaalada Gaalkacyo ayaa xilligaan u baahan ku noolaanshaha Nabadda iyo in Magaalada Gaalkacyo ay la tirsato Magaalooyinka kale ee dalka ka jira ee dhanka horumarada ku tilaabsaday.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png 0 0 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-10-09 08:43:212016-10-09 08:43:21Madaxweynaha Galmudug oo sheegay Gaalkacyo inaysan labo Maamul ka wada talineyn..
Daah Fur iyo Xog ku Saabsan Weerarkii 11 September Wax ogow 9 Xaqiiqo oo islamka ku saabsan oo la yaab leh oo ayna dadka Muslimka...